နည်းဗျူဟာ ၃ - ဗွီဒီယို | 10 tactics
နည်းဗျူဟာ ၃ - ဗွီဒီယို
Submitted by hadi on Fri, 10/29/2010 - 17:47
ဒီနည်းဗျူဟာ ကဒ်လေးကို ဆွဲချရယူပါ (pdf ၈၃၆kb)
ဒီနည်းဗျူဟာ ဟာ ကွဲပြားတဲ့ ဘာသာစကားများနဲ့ စာပေများကို တီထွင်ကြံဆပြီး အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။
မိန်းမဆန်သော လှည့်စားမှုတခုနဲ့ ရှေးရိုးစဉ်လာကို အသက်သွင်းခြင်း
အမျိုးသမီးများနဲ့ အမှတ်တရ စကားဝိုင်း၊ ကိုင်ရို၊ အီဂျစ်နိုင်ငံ
အမျိုးသမီးများနဲ့ အောက်မေ့ဖွယ် စကားဝိုင်း၊ ကိုင်ရို၊ အီဂျစ်
အနုပညာရှင်တွေ အကျိုးဆောင်တွေက အမျိုးသမီးရှုထောင့်က ပြန်ပြောတဲ့ အာရပ် ပုံပြင်တွေပေါ် အခြေခံပြီး ကာတွန်းဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းတို ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ ဗွီဒီယိုမှာ တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေ သုံးပြီး စိတ်ကူး ကွန့်မြူးကာ အထိမခံတဲ့ ကျားမ မညီမျှမှုကို တင်ပြဖို့ ကြိုးစားထားတယ်။
အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Tools များ- ကွန်ပျူတာထဲ စကန်ဖတ် ထည့်သွင်းထားတဲ့ လက်နဲ့ ရေးသော ပုံတွေ အသက်သွင်းဖို့ Adobe software (Photoshop, After Effects and Premiere)
ဆက်လက် လေ့လာရန် LINK များ -
အမျိုးသမီးများနဲ့ အောက်မေ့ဖွယ် စကားဝိုင်း
လက်ရှိ ပြဿနာတရပ်ကို ပုံဖော်ခြင်း
၂၀၀၆ အစ္စရေး ကျူးကျော်မှုအတွင်း အကျိုးဆောင်တွေက လက်ဘနွန် အခြေခံ အဆောက်အဦတွေကို ဗုန်းကြဲမှုနဲ့ အပျက်အစီးပြ မြေပုံများ ဖန်တီးရေး၊ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီမြေပုံတွေကို နာလန်ထူရေးနဲ့ အားပေးထောက်ပံ့ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။
အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Tools များ - Adobe Illustrator, Blogspot, Wordpress.
ဆက်လေ့လာဖို့ Links များ -
ဆာမီဒေါင် ကွန်ရက် စာမျက်နှာ
Nawaat.org နဲ့တူနီးရှား အကျိုးဆောင်များ
တူနီးရှား အစိုးရက အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတွေဆီက ဗွီဒီယို သက်သေခံချက်တွေ ကြည့်တာကို ပိတ်ပစ်ဖို့ ဗွီဒီယိုဝက်ဆိုဒ် Youtube နဲ့ Dailymotion တို့ကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို အကျိုးဆောင်တွေက ဂူဂဲလ်မြေပုံပေါင်းစပ်မှု (Google Earth Mashup) ထဲ သမ္မတအိမ်တော်လို တနေရာထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေး သုံးဖက်မြင် ဗွီဒီယိုမြေပုံတွေ လုပ်ပြီး နေရာချတာနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ Youtube တိုက်ရိုက်ကြည့်ခွင့် မရတဲ့ နေရာတွေမှာတောင် ဒီဗွီဒီယိုကို ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Tools များ Google Earth, Google Maps, YouTube.
ဆက်လေ့လာရန် Links များ -
Nawaat.org ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ ဗွီဒီယို မြေပုံ
‹ နည်းဗျူဟာ ၂ - ပြဿနာ ဆန်းစစ်ချက်
နည်းဗျူဟာ ၃ - ပြဿနာ ဆန်းစစ်ချက်
နည်းဗျူဟာ ၃။ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ပါ
နည်းဗျူဟာ ၃ - ပြဿနာ ဆန်းစစ်ချက် ›